China LABER® U Profile Glass orinasa sy mpanamboatra | Yongyu
U mamatsy fitaratra U gelas fitaratra- Ny fifangaroan'ny aesthetics sy fitaovana
Ny fisafidianana fitaratra ho an'ny fehiloha trano na fisarahana amin'ny birao dia tsy tokony homena azy ireo. Tokony handinihanao foana ny safidinao mba hiafaran'ilay sary tonga lafatra. Raha izao no ataonao izao, dia ny fitaratra ny mombamomba ny U antsika dia mendrika mijery azy.
Tsy vitan'ny hoe manintona ihany, fa ity karazana U profil / vera fantsom-bolo U ity koa dia mirehareha fananana maro izay mety tsara amin'ny fampiharana ivelany sy anatiny.
• mitombo tanjaka raha oharina amin'ny fitaratra mahazatra
• fihanaky hazavana lehibe
• ny fisian'alina tsara indrindra
• fitehirizana hafanana
• fiarovana ny tabataba
Rehefa tonga amin'ny aesthetics izy io, ny fitaratra U profil / U fantsona dia afaka manampy fiantraikany mahavariana amin'ny famolavolana anatiny. Azo zahana na sandblasted izy ireo hahatratrarana haavony ilaina sy hatsaran-tarehy.
Misafidiana ny fomba fanao manokana amin'ny alàlan'ny fitaratra fantsom-pivarotana fantsom-pivalanana U ho an'ny rindrina fitaratra / rindrina amin'ny ambainy, fisarahana anaty anatiny, na zavatra hafa
Raha mila fiantraikany manokana na vokatry ny ranomandry, afaka manampy ny Yongyu Glass. Vonona izahay hanatanteraka baiko mahazatra ho an'ny vokarintsika hamita ny fizarazarana ny efitranonao na ny rindrina fitaratra misy ny fitaratra U profil / U fantsom-pahalalana U. Ho fanampin'ny maha-te-hanao eco dia ireo no mahomby indrindra aminao (na dia mitady volavola mifanaraka amin'ny firafitra aza ianao).
Manapa-kevitra momba izay fitaratra miharihary aminao ary avelao i Yongyu Glass manome anao!
Previous: Famandrihana fitaratra sy fefy azo antoka
Manaraka: Fitaratra Smart (fitaratra fitaratra mazava)
Taratasy ambany sary Iron U
U Mamatsy fitaratra Glass
U Fandrindran'ny fitaratra fitaratra